I-Kingtai yenze amacala amaningi aphumelele kakade kumakhasimende ethu okwenza i-2D PVC Keychain ukusabalalisa imibono yabo kanye nelogo yenkampani. I-Soft PVC Keychains, enye yezinto ezaziwa kakhulu zokunikeza ukukhuthaza ulwazi. Ayisekho kuphela okuthengiswayo kwe-mascot kodwa futhi ifaka isicelo sokusetshenziselwa isikhumbuzo. Ungase ungaqapheli ukuthi i-Soft PVC Keychains ingasakaza ngokushesha kangakanani ukuthengisa, lapho abantu beyibeka ezikhwameni zabo, isikhwama semali, okhiye, izimoto, izikhwama, umakhalekhukhwini, konke kwenza umsebenzi wakho kahle. Ngokushesha ukusithumela imibono yakho kithi maduze, singenza omakakhiye abanesimo se-2D noma se-3D, sinemibala ehlukahlukene esitokweni ukuze uthole izinketho, into encane ecolekileyo nakanjani izoletha umbono wakho/ilogo yenkampani ibonakale ngokushesha kunalokho ongakubona!
Thola ukuklama kwakho kuqashelwe ngokhiye bethu bangokwezifiso be-acrylic. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna izindlela ezihlukile zokuthuthukisa ibhizinisi lakho, qala uhla lwethu lwemikhiqizo eyingqayizivele eqoqwayo noma ufuna ukukhulisa okuthengiswayo kwenkampani yakho, iyiphi indawo engcono yokubonisa imiklamo yakho kunokhiye bothile?
Umdwebo wethu we-laser unomphela futhi wenziwa ochwepheshe. Siqinisekisa ukuthi ayikho imali yokusetha, ukushintshwa okusheshayo kanye nokulethwa ngesikhathi/ngesikhathi somnqamulajuqu wakho. Ukudweba nge-laser kubushelelezi, kunembe ngokucijile futhi kunobuciko. Saziwa ngokuqoshwa kwethu kwe-laser kwe-top-of-the-line ukuze sidizayine isivuli sewayini esihle kakhulu. Idizayini yokuvula ibhodlela lokhiye wejubane lokuvula owenziwe ngesiqephu esisindayo sensimbi engagqwali, engenziwa ngokwezifiso ngokugcwele ngemidwebo eqoshiwe ejulile ye-cnc ngemva kokusetshenziswa kwesiginesha yethu yegolide ye-Titan Finish, ekhiqiza imibhalo eqoshiwe edonsa amehlo ezohlala impilo yonke yokoma. ubusuku.
Akekho umthandi wewayini ongaphuthelwa yisivuli sewayini esiyingqayizivele, esiqoshiwe! Lezi zivuli zebhodlela lewayini ezenziwe zaba ngezakho kanye nezikhiya zamakhokho zangokwezifiso zingakudala futhi zisezingeni eliphezulu ukuze zisetshenziswe ukuphila kwakho konke. Futhi, sinamasethi esipho esivula iwayini esigcwele ngamathuluzi amaningi ewayini! Khetha okusemfashinini nokushelelayo noma okune-rustic okunamabala. Sineqoqo elifanele khona lapha.
I-Kingtai iwuchwepheshe be-Die Cast Keychain, obufana ne-metal alloy keychain, i-metal keyring, isibambi sikakhiye we-alloy, iketango elingenalutho, iketango lesilwane, isheyini likakhiye legolide, isheyini likakhiye elisiliva, iketango elingenalutho lelogo, I-Keychain Metal, i-custom alloy keychain, i- fashion alloy keychain , Isheyini elithambile Loqweqwe Lokhiye, iketanga likakhiye loqweqwe oluqinile, iketango lokhiye lokuhlanganisa i-epoxy, i-offset Printing Keychain, njll.
Isici salolu hlobo lwe-keychain ngokuvamile sinezinhlangothi ezintathu, ngakho-ke singenziwa ngezinto ze-zinc alloy ngokusho kobuciko obuhlukile. Futhi ukwenza i-keychain ye-die cast ibe yinhle kakhulu, singakwazi ukufaka umbala ngaphezulu, njengegolide, i-pearl igolide, i-nickel, i-pearl nickel, emnyama, i-rose yegolide, ithusi, ithusi, isiliva sasendulo nokunye. Ingagqamisa ilogo yakho, imvamisa sisebenzisa isipho sesikhumbuzo, isipho sokuvakasha nokunye.
Ukusetshenziswa Okungcono Kakhulu Lezi zindandatho zokhiye zingasetshenziswa ekukhushulweni kwenkampani, ezikhangisweni futhi zisetshenziswe njengesipho esiyisikhumbuzo sabangane, okubonisa inani elihle lobunikazi besithombe. Enziwa Kanjani Izindandatho ezingukhiye zingasebenzisa izinqubo ezihlukahlukene, ezinoqweqwe lwazo oluthambile, uqweqwe lwazo oluqinile, koqweqwe lwazo oluphrintiwe, isigxivizo sethusi kanye nengxube yengxube ye-zinc konke okutholakalayo, kanye ne-PVC, i-acrylic ne-flexifoam. Amathuba angapheli okukhiqiza kabusha ilogo yakho! Isikhathi sokukhiqiza: izinsuku zebhizinisi eziyi-10-15 ngemuva kokugunyazwa kobuciko. 1. SOFT ENAMEL KEYRINGS Sof...
Phromotha umkhiqizo wakho futhi usize ugcine amakhasimende akho ephephile ngenkathi ye-COVID-19 ngamathuluzi okubhala aphrintiwe ngokwezifiso namadivayisi okubhala. Isikhunta esivula umnyango esingathinteki esingenakhiye wokuthinta esinelogo yangokwezifiso futhi sinikeze ngemikhiqizo yekhwalithi enhle ngentengo yokuncintisana.
Gwema ukuthinta izindawo ezivamile usebenzisa lezi zandla, alikho ithuluzi lokuthinta. Isiqephu esinemisebenzi eminingi esingafakwa uphawu nganoma iyiphi idizayini.
Ilogo yangokwezifiso ye-diecast + yokuhlukanisa
Izinto ze-Zinc, igolide lasendulo noma isiliva
500 isiqephu esincane
Ithunyelwa emavikini angu-2-3
I-Kingtai inikeza ukukhethwa okukhulu kwamaketanga okhiye besikhumba okwenziwe ngokwezifiso ukujabulisa amakhasimende akho futhi azokulethela inani elingcono kakhulu lokutshala imali. Kukhona inala yokuhlukahluka uma kuziwa ezitayela eziqukethe okunamathiselwe okulula kuya kokuyinkimbinkimbi. Akumangalisi uma uthola amathegi alula abenziwe ngokwezifiso okhiye bokuvakasha kanye namaketango okhiye benhlanganisela yensimbi yesikhumba esigabeni esifanayo. Uma unomuzwa wokuthi ukukhetha kwakho kwesipho kungase kungahambi kahle kubathandi bezilwane noma izishoshovu ezimelene nesikhumba, masikwenze kucace ukuthi wonke amaketanga okhiye besikhumba okukhangisa enziwe ngesikhumba esingelona iqiniso futhi azikho izilwane ezilimale ngesikhathi sokukhiqiza. Akudingekile ukusho ukuthi amaketanga okhiye besikhumba aqondene nawe enza umbukiso ohlaba umxhwele noma izipho zebhizinisi ngoba amakhasimende akho awakwazi ukwenqaba lezi zipho eziyinkimbinkimbi nezilusizo. Amaketango okhiye besikhumba aphrintiwe enza ukuthandwa kwephathi okuhlaba umxhwele kanye nezipho zomuntu ngamunye, futhi.
Iphinikhodi ye-Kingtai Lapel yenza izinhlobo eziningi zamaketanga okhiye bensimbi namasongo ayisihluthulelo anezinto ezihlukahlukene, izinqubo nezinamathiselo ukuze kufezeke izimfuno ezahlukene zawo wonke amaklayenti. Iketango elithambile loqweqwe lokhiye lingenziwa ngokugxiviza, ukushumeka isithombe noma ukusakaza, futhi impahla iyingxubevange ye-zinc, ithusi, ithusi noma insimbi ukuze uthole izinketho, futhi igcwaliswe ngemibala ethambile yoqweqwe lwawo kanye nokuqedela okuhlukile.
Enza ngendlela oyifisayo isikhungo esizungeza ngelogo yakho, hlanganisa ukugcwaliswa kombala ngisho nokusika izindawo. Beka ilogo yakho kanye nomlayezo phakathi nendawo yokunaka ngalawa maketango okhiye esikhungo sokuphotha esiyingqayizivele. Ukuze uthole amandla engeziwe okuthumela imilayezo, umbhalo ungagqanyiswa onqenqemeni futhi ugcwaliswe ngoqweqwe lwemali olufana nombala we-Pantone, konke okufakwe enameni yento. Itholakala ngamaringi angaphandle ayindilinga futhi amise okweqanda. Njengayo yonke imikhiqizo yethu eyenziwe ngokwezifiso ngokuphelele, i-elementi yokuphotha namaringi angaphandle angagcwaliswa umbala, aqedwe i-sandblast, aphuculwe, afakwe i-satin matte, futhi asikwe.
Ingabe ufuna ukuthenga ama-Keychains angokwezifiso? Sinenketho evelele, ukhiye wethu owenziwe ngezifiso ungakhiqizwa ngombala ophelele ophrintiwe wedijithali, imibala yamabala, noma singaqopha nge-laser amaketango okhiye bakho bangokwezifiso kuye ngelogo yenkampani yakho. Sinikezela ngezinhlobonhlobo zama-Keychains ezenziwe ngezifiso; uma udinga ulwazi olwengeziwe mayelana nebhizinisi lethu eliphrintiwe le-Keychains noma okunye futhi ubheke uku-oda ngobuningi be-Keychains ezinkampani sicela ukhulume nomunye wabaphathi bethu be-akhawunti onobungane ozokweluleka ngenjabulo.
12345 Okulandelayo > >> Ikhasi 1/5